आज देशभर लोडसेडिङ, यी यी ठाउँमा पहिले जानेछन् बत्ती! - Media Dabali
आज देशभर लोडसेडिङ, यी यी ठाउँमा पहिले जानेछन् बत्ती!
काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ हुने जनाएको छ। प्रतिकरणले देशभर बत्ती जाने क्षेत्रबारे जानकारी दिइसकेको छ। निर्माण कार्यको लागि भन्दै आज शनिबार दिनभरजसो बत्ती जानेछ। पछिल्लो केही समययता देशका विभिन्न ठाउँमा नियमितजसो बत्ती आउने जाने समस्या भइरहेको छ।
आज पोखरा, धनकुटा, चितवन, काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा बत्ति जानेछ। प्राधिकरण्का अनुसार राजधानीको लगनखेल र पुल्चोक वितरण केन्द्र तथा भैंसेपाटी उपवितरण केन्द्रअन्तर्गत् पर्ने खोकना फिडरमा इन्टरब्रान्चको मिटरिङ युनिट परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म बत्ती काटिने छ ।
उक्त फिडर अन्तर्गत वितरण हुने वस्तीमा विद्युत काटिने जानकारी प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तै बालाजु वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने विष्णुमति फिडरमा चक्रपथ विस्तार कार्य जारी रहेकाले १० बजेदेखि ३ बजेसम्म बत्ती काटिने बताइएको छ । जसकारणा बालाजु क्षेत्रमा शनिबार दिउँसो बत्ती आउने छैन ।
यस्तै वाइपास विद्युत् संरचना सार्न तथा व्यवस्थापन गर्न चितवनको भरतपुर र माडीमा बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बत्ती काटिने छ । चितवनकै मेघौली, नारायणगढ, गीतानगर तथा रामपुरमा बुस कटिङ गर्न ट्रान्सफर्मरको इन्कमिङ भीसीबी परिवर्तन गर्न सोही समयमा बत्ति काटिने बताइएको छ ।
चितवनको अन्य केही स्थानमा पोल सार्न र फिडर मर्मत गर्न बत्ती काटिने छ ।नवलपुरको कावासोती र अरूणखोलामा पनि बुस कटिङ गर्न बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म लाइन काटिने बताइएको छ । पोखराको हेम्जामा स्मार्ट मिटर परिवर्तन गर्न १० बजेदेखि ५ बजेसम्म र धरानदेखि धनकुटासम्म बुस कटिङ गर्न शनिबार १० बजेदेखि ५ बजेसम्म लाइन काटिने छ ।
उता कुलमान गए, यता काठमाडौंमा बिजुलीको भूमिगत तार पड्कियो !
काठमाडौंमा विजुली बस चल्यो
काठमाडौंमा सुरू भयो लोडसेडिङ तालिका, भोलि ५ घण्टा बिजुली जाँदै
काठमाडौंमा लोडसेडिङकाे संकेत, भोलि यी ठाउँमा बत्ती नआउने
सोमवार, कार्तिक १७ २०७७०७:५४:५५
# कुलमान घिसिङ # बिजुली